महासंघको महाधिवेशन आज, अध्यक्षमा क–कस्को दाबी ? | Educationpati.com
महासंघको महाधिवेशन आज, अध्यक्षमा क–कस्को दाबी ?
२०७४ फागुन २५ गते ११:३४मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम महाधिवेशन आजबाट शुरु हुँदैछ । महाधिवेशन सँगै महासंघको नयाँ नेतृत्वमा को आउला भन्ने चर्चा र चासो शुरु भएको छ ।
शुक्रवार भृकृतिमण्डपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । महाधिवेशनमा देशभरका झण्डै ६ सय प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुको सहभागीता रहने जनाइएको छ ।
समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनको व्यानरमा २०६८ सालमा पहिलोपटक देशव्यापी संयुक्त आन्दोलन गरका थिए । पछि, २०७१ साल माघ २७ गते नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनमा आवध्द १६ वटा संगठनको साझा संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ गठन गरिएको थियो ।
पहिले तदर्थ समितिको रुपमा गठनभएको महासंघलाई विधान अधिवेशनको वैधानिक लेप लगाउन खोजिएको थियो । महासंघ बनेको यत्तिका दिनसम्म पनि हरेक जिल्लामा महासंघ गठन हुन सकिरहेको छैन । महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार हालसम्म ४४ जिल्लामा मात्रै महासंघ गठन भएको छ । महाधिवेशनमा भने महासंघ गठन नभएपनि संघसंगठनहरुबाट प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहने निरौलाले जानकारी दिए ।
कसले हातपार्ला नेतृत्व
यस अघि २०६० सालमा नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघठन लगायतका संगठनहरु मिलेर नेपाल शिक्षक युनियन गठन गरेका थिए । त्यसमा अन्य संगठनहरुको सहभागिता रहेपनि अध्यक्ष र महासचिव संघ र संगठनले आलोपालो लिँदै आएका थिए । तर, महासंघमा तीन समान्तर शिक्षकका छाता संगठन जोडिएकाले आलोपालो त भनिएको छैन ।
तर, सदस्य संख्याकै आधारमा दुई पद अन्य संगठनमा जाने देखिदैन । यसअघि शिक्षक संगठनका अध्यक्ष केशव निरौला अध्यक्ष रहेकाले अबको नेतृत्व राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पाउनुपर्ने दावी गरिएपनि यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमतिका आधारमा नेतृत्व गठन गर्ने भनिएपनि यसपाली पनि भागवण्डा हुने निश्चित छ । यसअघि शिक्षक संघले अध्यक्ष, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले महासचिव, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले सहअध्यक्ष पाएको थियो । यदी भागवण्डा भए राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले अध्यक्ष, शिक्षक संघले महासचिव र एकीकृत अखिल शिक्षकले फेरी सहअध्यक्ष पाउने सम्भावना छ ।
तर, शिक्षक संघका अध्यक्ष समेत रहेका महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले नेतृत्वमा पहिले सहमति नभएकाले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्दा संघको पनि स्वत्त दावी रहने बताउछन् । 'कसैलाई टिका लगाउने कुरा भएन, निर्वाचन भएपनि सहमति भएपनि संघको अध्यक्षमा दावी रहन्छ ।' निरौलाले भने ।
उता, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने महासंघको नेतृत्वका लागि यस अघि नै सहमति भइसकेकाले सो अनुसार संगठनले अध्यक्ष पाउने सुनिश्चित रहेको बताउछन् ।' संगठनले अध्यक्ष पाउने विषयमा कुनै विवाद छैन । यदी यसलाई विवादको विषय बनाइए संगठन महासंघमा बस्दैन ।' शर्माले भने ।
उता, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले महासंघको नेतृत्वका विषयमा यस अघि सहमति नभएपनि यसपाली सहमति मै नेतृत्व चयन हुने बताउछन् । आफ्नो संगठन नेतृत्वको स्वाभाविक दावेदार भएपनि अध्यक्षकै लागि मरिहत्ते नगरिने उनी बताउछन् । सहमतिमा जे हुन्छ त्यो मान्न हामी तयार छौं ।
अध्यक्षको दौडका को–को
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा महास.घको अध्यक्षको दौडमा अगाडी देखिन्छन् । विगतमा आफुलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भइसकेकाले आफु निर्विरोध अध्यक्षको उम्मेदवार हुने उनको दावी छ । संगठनमा थापाको नेतृतवमा महासंघको नेतृत्व टोलि गठन भइसकेकाले त्यहाँ उनको नाममा खासै विवाद देखिन्न । सदस्यको हिसावले पनि उनको संगठन ठूलो भउकाले र यसअघिको नेतृत्व संघले लिइसकेकाले अध्यक्षमा थापाको पल्ला भारी देखिन्छ ।
उता, नेपाल शिक्षक संघबाट महासंघको नेतृत्वमा जाने टोलीको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । संघको स्रोतका अनुसार गोकर्ण बानिया र लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले महासंघमा संघको नेतृतव गर्ने सम्भावना बढी छ । सदस्य संख्यात्मक रुपमा संघको दावी अध्यक्षमा रहने देखिएपनि यसअघिको अध्यक्ष पनि संघ कै भएकाले नैतिक रुपमा संघलाई अध्यक्षको दावी गर्न समस्या देखिन्छ । र, सहमतिको नाममा अध्यक्ष जिप्टाउन सकिने संघको हिसाव किताव देखिन्छ ।
यसैगरी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले पूर्ण दवाडीको नेतृत्वमा महासंघमा जाने टोलीको निर्णय गरिसकेको छ । संगठनको सदस्यताका आधारमा दवाडीको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कम रहेपनि संघ र संगठन बीच सहमति नभए सहमतिको आधारमा अध्यक्ष बन्ने सम्भावना दवाडीको पनि रहेको देखिन्छ ।